Carbomer, Carbopol, Polyethylene Glycol - Yinuoxin
Carbomer isan-karazany isan'andro
Glycol Polyethylene Glycol isan'andro
Fanaparitahana fehikibo ho an'ny tontolo iainana
Mpiasa mamoaka lasitra anaty tontolo iainana ho an'ny tontolo iainana
Medaly Glyoly Polyethylene Glycol
Carbopol amin'ny pharmaceutika
Momba ny orinasanay
Inona no ataontsika?
Qingdao Yinuoxin New Material Co., Ltd. dia miorina amin'ny tanàna amoron-tsiraka tsara tarehy Qingdao, atsinanan'ny Helodrano Jiaozhou, akaikin'ny Qingyin Expressway. Manakaiky ny seranam-piaramanidina Qingdao Liuting, Terminal Haindao Container, Port Qingdao, Rizhao Bulk Cargo Terminal, mora sy milamina ny fitaterana. Ny orinasanay dia manan-jo hanafatra sy hanondrana, ary orinasa mamokatra andiam-pamokarana vita amin'ny fingotra ary mivarotra vokatra simika avo lenta.
Polyethylene Glycol 6000 Peg6000
Polyethylene Glycol 4000 Peg4000
Peg200 Polyethylene Glycol 200
Mifandraisa aminay raha mila rakikira santionany misimisy kokoa
Manana serivisy varotra matihanina, avo lenta, avo lenta ary mpiasa fitantanana izahay
Na mialoha ny varotra izany na aorian'ny fivarotana, dia hanome anao serivisy tsara indrindra izahay, hahafahanay mahatakatra sy mampiasa ny vokatray haingana kokoa.
Hatramin'ny nananganana azy valo taona lasa izay, ny orinasa dia nanolo-tena hanome vokatra avo lenta sy avo lenta ho an'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany.
Ny vokatray dia manana kalitao sy laza tsara, izay ahafahanay manangana sampana sy mpaninjara maro eto amin'ny firenentsika.
112020 / Nov
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny Tween 80 sy ny Tween 20?
Andao hianarantsika ny momba ny Tantara 80 (fantatra amin'ny anarana hoe Tween 80 na polysorbate 80) sy ny Tantara 20 (fantatra koa amin'ny hoe Tween 20) amin'ny fomba telo samy hafa 1。 Ny synthesis of Tween 80 dia mifototra amin'ny polymerization ny desaturated sorbitol monooleate sy ethylene oxide. Synthesis of Tantara 20: fifangaroan'ny polyethyl ...
Fampiharana ny agen silaky famotsorana anatiny amin'ny indostrian'ny famokarana
Nandritra ny fotoana lava, ny indostrian'ny vokatra dia mitandrina tsara amin'ny fampiharana ny aotom-panafenana anatiny. Mety misy ifandraisany betsaka amin'ny fahatakarana samihafa sy ny fampiasana ny vokatra Misy tsy fifankahazoan-kevitra maro momba ny mpamatsy fanafahana amin'ny silica gel One. Ho an'ny fiantraikan'ny pri ...
Ao amin'ny 2025, ny sandan'ny tsena karbomerika manerantany dia antenaina hitombo ho 10,34 miliara yuan
Goavam-be ny tsenan'ny karbomer Qingdao. Hita fa ao anatin'ny dimy taona ho avy, dia hisy tsena 10,34 miliara yuan hamboarina amin'ny 2025. Manaraka izany, andao hanaraka ireo fitaovana vaovao an'ny Qingdao yinuoxin Carbomer dia homopolymer an'ny acrylic acrylic, crosslinking na famatorana amin'ny o ...